I-History Cottage- "Indlu yeRock"
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguKatie
93% yeendwendwe zakutshanje zinike indawo izinga leenkwenkwezi eziyi-5.
Hlala ngaphakathi kwisiqwenga sembali kwindlwana yethu encinci entle! Le ndlu yakhiwa ngo-1856 ngabanini bamakhaya baseDatshi kwaye yahlaziywa ukuba ibandakanye zonke izinto eziluncedo zale mihla kunye nezethu ilifa losapho lwakudala. Thatha uhambo olufutshane ukuya kwindawo yokuthenga enomtsalane ePella, tsibela kwindlela yebhayisekile ukusuka kwindlela yokukhwela usapho ukuya eLake Red Rock, okanye uhlale ekhaya ukuze ungqengqe kwi-hammock okanye uphumle ecaleni komlilo. Relax kwaye uzenze ekhaya; Siza kubonelela ngayo yonke into oyifunayo ukuze wenze iPella yakho ihlale inye ukuze uyikhumbule!
Bonisa zonke 23 izinto onokuzisebenzisa
4.93 · Izimvo eziyi-15
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi15
Umbuki zindwendwe ngu- Katie
Siza kukuthumelela ikhowudi yokungena kwipropathi ukuze ufike nanini na xa kukufanele! Siyavuya ukufumaneka kuyo nayiphi na imibuzo onokuba nayo kwaye unokusibona sijikeleze ngexesha lokuhlala kwakho usenza izinto ezincinci ukugcina ipropathi!
Siza kukuthumelela ikhowudi yokungena kwipropathi ukuze ufike nanini na xa kukufanele! Siyavuya ukufumaneka kuyo nayiphi na imibuzo onokuba nayo kwaye unokusibona sijikeleze ngexes…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Pella